Uvavanyo lokuguga kwe-UV kunye neqondo lobushushu-iYuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Uvavanyo lokuguga kwe-UV kunye nobushushu okunye okubizwa ngokuba luvavanyo lokuguga kwemozulu ukuvavanya umgangatho wezinto okanye iimveliso ukuba ziyahlangabezana nokusebenza okulindelekileyo kunye nexesha lokuphila. Olu vavanyo lilinganisa iimeko zemozulu ezahlukeneyo, ezinje ngokufuma okuphezulu, imitha ye-UV ephezulu kunye nobushushu obuphezulu.
Siqhubeka novavanyo phantse kuzo zonke iimveliso zekhebula ezingaphezulu
-Ukuvalwa kwe-optic splice
-Ibhokisi yokuhanjiswa kwe-optic
-FTTH yehla intambo yecamp
Igumbi lokuvavanya lenziwe kwangaphambili ngokuzenzekelayo, elinokuthintela iimpazamo zabantu ukuqinisekisa ubunyani kunye nokuchaneka kovavanyo. Inkqubo yovavanyo lokuguga kwemozulu ibandakanya ukubeka iimveliso kwigumbi elinomswakama osetiweyo, imitha ye-UV, ubushushu.
Uvavanyo olwenziwe kwangaphambili ngemijikelezo emininzi yokunyuka kunye nokuwa kweekhrayitheriya ezichaziweyo. Umjikelo ngamnye ubandakanya iiyure ezithile zemozulu enobundlongondlongo. Zonke zilawulwa yiradiyetha, ithemometha njl. Imitha, ubushushu, ukufuma ratio kunye nexesha zinamaxabiso ahlukeneyo kwisiseko kwimigangatho EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yezixhobo zokuhambisa umbane, kunye ne-IEC 61284 ngaphezulu intambo ye-fiber optic, kunye nezixhobo.
Sisebenzisa ukulandela imigangatho yovavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kunye nolawulo lwekhwalithi yemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu banokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.